အဝတ်အထည်လေးတွေ ပရုပ်လုးံနံ့လေးသင်းနေအောင်၊ သန့်ရှင်းတဲ့ရနံ့လေး၊ ပိုးမွှား တွေတက်မှာလဲ မပူရအောင်ဆိုပြီး ပရုပ်လုံးတွေကိုရှိသမျှ အဝတ်ဗီရို၊မွေ့ယာ၊ စောင်တွေသိမ်းတဲ့နေရာ၊ သားသား မီးမီး တို့ရဲ့အဝတ် ခြင်းတောင်းတွေထဲမှာထည့်ကြတာဆန်းတာလုပ်လို့ပြောစရာရှိတယ်။ ဘာများ မှားပြန်ပြီလဲပေါ့။
အင်္ဂလိပ်လို Moth Balls လို့ခေါ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ ပရုပ်လုံးလို့သိကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ပိုးမွှား ပြေးအောင်သုံးတာပေါ့လေ။ ပါဝင်တဲ့ဓာတုပေဒဓာတ်က Naphthalene နဲ့ Paradichlorobenzene. (နပ်ဖ်သလင်း နဲ့ပါရာဒိုင်ကလိုရိုဘန်ဇင်း) ဖြစ်ပါတယ်။
ပရုပ်လုံးရဲ့အာနိသင်ကိုက တဖြေးဖြေးလုံးပါးပါးပြီး အငွေ့ ပျံတာလေ။ ပျံတဲ့အငွေ့တွေက အပေါ်ကပြောတဲ့ ဓာတုဓာတ်တွေပေါ့။
စူးစူးရှရှနဲ့သင်းပျံတဲ့ရနံ့လို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့အငွေ့တွေက သားသား မီးမီးတို့အပြင် လူကြီးတွေရော ၊ ကလေးငယ်၊ ဖိုးဖိုးဖွားဖွား အားလုးံရဲ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့အဆိပ်ငွေ့သဘောပါပဲ။ ဖြေးဖြေးချင်း သူလဲလုးံပါးပါးရင်း ကိုယ်ကိုလဲထိခိုက်နေတာပေါ့။
အနဲအများပဲကွာတယ်။ သိတောင်မသိလိုက်ကြဘူး။ အဲဒီအငွေ့တွေက မျက်စိ၊ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း စတာတွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ ခေါင်းကိုက်တာ၊ မူးတာ၊ အန်ချင်တာဖြစ်တတ်တယ်။ တချို့ လေ့လာမှုတွေအရ ကင်ဆာအချို့နဲ့တောင် စပ်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုပဲ။
နပ်ဖ်သလင်းဓာတ်က ပိုဆိုးတဲ့အဆိပ်ဓာတ်ပါ။ သွေးနီဥလေးတွေကို အချိန်မတိုင်ခင်ပျက်စီးစေတဲ့ အာနိသင်ရှိတယ်။ သွေးအားနည်းရောဂါ၊ သွေးနီဥတွေပျက်စီးရင်ဖြစ်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။
G6PD ဆိုတဲ့အင်ဇိုင်းချို့တဲ့မှုရှိသူတွေဆို ပိုပြီးတောင်ထိခိုက်တယ်။ လူကြီးနဲ့ ကလေး ခံရတာချင်း ဘာကွာမလဲမေးစရာရှိတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ ဒီအဆိပ်ဓာတ်တွေကို ကိုယ်ကနေထုတ်ပြစ်နိုင်တဲ့အားအင်က လူကြီးထက်စာရင် နည်းသေးတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ပိုအန္တရာယ်ရှိတာပေါ့။ လူကြီးတွေအတွက်လဲမကောင်းပါဘူး။
ခုခေတ်မှာ ပရုပ်လုံးဖြူဖြူလေးတွေတင်မကတော့ဘူး။ အရောင်စုံ ဒီဇိုင်းစုံနဲ့ဆိုတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံ မျိုးစုံဈေးကွက်ထဲမှာပေါ်နေပါတယ်။
ဗီရိုထောင့်၊ ခြင်းထောင်းထောင့်မှာတွေရင် ကြမ်းပေါ်လိမ့်ကျနေတာတွေ့ရင် သားပိစိ၊ သမီးပိစိလေးတွေက ထုးံစံအတိုင်းပါးစပ်ထဲကောက်ထည့်လိုက်မှာပဲ။ ဒါဆိုပိုဆိုး။ ဒါကြောင့်သေချာသိမ်းရတယ်။
ဟုတ်ပြီ အငွေ့ကရှူမိလို့ရေရှည်မကောင်းဘူးဆိုရင် ပရုပ်လုံးနဲ့အကြာကြီးထိတွေ့ထားတဲ့ အဝတ်ကိုဝတ်ရင်ရောလလို့ မေးစရာရှိတယ်နော်။
အရေပြားက နေထိတွေ့တာလဲ မကောင်းပါဘူး။ ဓာတ်တွေက အဝတ်တွေထဲမှာစိမ့်ဝင်ပြီးရှိနေပါတယ်။ ပြန်လျှော်ပြီး နေလှန်းခြောက်သွားမှဝတ်ပေးတာကောင်းပါတယ်။
ပရုပ်လုးံဝယ်ရင် အထက်ကပြောတဲ့ ဓာတုနာမည်ပါတာဆိုရင် ဝေးဝေးကရှောင်ပါ။
တချို့ပရုပ်လုံးတွေက ထင်းရှူးသားနဲ့လုပ်တာရှိတတ်တယ်သုံးလို့ရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာရှိမယ်မထင်ဘူး။ ထင်းရှူးသားလေးထည့်ထားတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်။ အကောင်းဆုးံကတော့ သေချာလျှော် နေပူပူမှာလှန်းလှန်ပေး။
အိတ်လေးတွေနဲ့သိမ်းပေးရင် ပိုးကောင်မွှားကောင်တွေဝင်ဖို့ခက်သွားပါပြီ။ တချို့ကြတော့ လေးညှင်းပွင့်လေးတွေ၊ ထင်းရှူးသားသန့်သန့်လေးတွေကို အဝတ်အိတ်လေးထဲချုပ်ထည့်ပြီး ဗီရိုထောင့် လေးတွေမှာထားကြတယ်။
ဘာပဲဝယ်ဝယ်၊ ဘာပါဝင်လဲဆိုတာဖတ်ပါ။ ထုပ်ပိုးထားတာလေးလှတိုင်း အကောင်းစားမဟုတ်ပါ။ ခုပေါ်နေတဲ့ အမွှေးရည်စတာတွေရဲ့တခုချင်းဆီမှာ ဘာပါသလဲဆိုတာဖတ်ကြည့်ပါ။ အထက်ကပြောတဲ့ ဓာတ်တွေပါလားလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့အတုတွေပေါတဲ့ခေတ်၊ အတုမျိုးစုံကိုယ်နိုင်ငံဝင်လာနေတဲ့အချိန်မှာ တော်တော်သတိထားရပါမယ်။
ဒီမှတ်စုလေးဖတ်ပြီးချိန်မှာ မိဘတွေစိုးရိမ်ကြမယ်၊ သုံးနေတာ ဘာလုပ်ရမယ် စိတ်ပူမှာပဲ။ ဆက်မသုံး တော့ရင် အကောင်းဆုးံပါ။ ရောဂါလက္ခဏာတခုထဲကြည့်ပြီး ပရုပ်လုးံသုံးခဲ့တာကြောင့် တထစ်ချ ပြောမရပါ။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမှာပြသစစ်ဆေးခံယူပါ။
Credit to Child Health Myanmar
အဝတျအထညျလေးတှေ ပရုပျလုးံနံ့လေးသငျးနအေောငျ၊ သနျ့ရှငျးတဲ့ရနံ့လေး၊ ပိုးမှား တှတေကျမှာလဲ မပူရအောငျဆိုပွီး ပရုပျလုံးတှကေိုရှိသမြှ အဝတျဗီရို၊မှယေ့ာ၊ စောငျတှသေိမျးတဲ့နရော၊ သားသား မီးမီး တို့ရဲ့အဝတျ ခွငျးတောငျးတှထေဲမှာထညျ့ကွတာဆနျးတာလုပျလို့ပွောစရာရှိတယျ။ ဘာမြား မှားပွနျပွီလဲပေါ့။
အင်ျဂလိပျလို Moth Balls လို့ချေါပွီး မွနျမာပွညျမှာ ပရုပျလုံးလို့သိကွပါတယျ။ ဆိုလိုတာက ပိုးမှား ပွေးအောငျသုံးတာပေါ့လေ။ ပါဝငျတဲ့ဓာတုပဒေဓာတျက Naphthalene နဲ့ Paradichlorobenzene. (နပျဖျသလငျး နဲ့ပါရာဒိုငျကလိုရိုဘနျဇငျး) ဖွဈပါတယျ။
ပရုပျလုံးရဲ့အာနိသငျကိုက တဖွေးဖွေးလုံးပါးပါးပွီး အငှေ့ ပြံတာလေ။ ပြံတဲ့အငှတှေ့ကေ အပျေါကပွောတဲ့ ဓာတုဓာတျတှပေေါ့။
စူးစူးရှရှနဲ့သငျးပြံတဲ့ရနံ့လို့ သတျမှတျထားကွတဲ့အငှတှေ့ကေ သားသား မီးမီးတို့အပွငျ လူကွီးတှရေော ၊ ကလေးငယျ၊ ဖိုးဖိုးဖှားဖှား အားလုးံရဲ့ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစတေဲ့အဆိပျငှသေ့ဘောပါပဲ။ ဖွေးဖွေးခငျြး သူလဲလုးံပါးပါးရငျး ကိုယျကိုလဲထိခိုကျနတောပေါ့။
အနဲအမြားပဲကှာတယျ။ သိတောငျမသိလိုကျကွဘူး။ အဲဒီအငှတှေ့ကေ မကျြစိ၊ အသကျရှူ လမျးကွောငျး စတာတှကေို အနှောငျ့အယှကျဖွဈစတေယျ။ ခေါငျးကိုကျတာ၊ မူးတာ၊ အနျခငျြတာဖွဈတတျတယျ။ တခြို့ လလေ့ာမှုတှအေရ ကငျဆာအခြို့နဲ့တောငျ စပျဆကျမှုရှိတယျဆိုပဲ။
နပျဖျသလငျးဓာတျက ပိုဆိုးတဲ့အဆိပျဓာတျပါ။ သှေးနီဥလေးတှကေို အခြိနျမတိုငျခငျပကျြစီးစတေဲ့ အာနိသငျရှိတယျ။ သှေးအားနညျးရောဂါ၊ သှေးနီဥတှပေကျြစီးရငျဖွဈတဲ့ အကြိုးဆကျတှဖွေဈတတျတယျ။
G6PD ဆိုတဲ့အငျဇိုငျးခြို့တဲ့မှုရှိသူတှဆေို ပိုပွီးတောငျထိခိုကျတယျ။ လူကွီးနဲ့ ကလေး ခံရတာခငျြး ဘာကှာမလဲမေးစရာရှိတယျ။
ကလေးတှရေဲ့ ဒီအဆိပျဓာတျတှကေို ကိုယျကနထေုတျပွဈနိုငျတဲ့အားအငျက လူကွီးထကျစာရငျ နညျးသေးတယျလေ။ ဒါကွောငျ့ ပိုအန်တရာယျရှိတာပေါ့။ လူကွီးတှအေတှကျလဲမကောငျးပါဘူး။
ခုခတျေမှာ ပရုပျလုံးဖွူဖွူလေးတှတေငျမကတော့ဘူး။ အရောငျစုံ ဒီဇိုငျးစုံနဲ့ဆိုတော့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ပုံ မြိုးစုံဈေးကှကျထဲမှာပျေါနပေါတယျ။
ဗီရိုထောငျ့၊ ခွငျးထောငျးထောငျ့မှာတှရေငျ ကွမျးပျေါလိမျ့ကနြတောတှရေ့ငျ သားပိစိ၊ သမီးပိစိလေးတှကေ ထုးံစံအတိုငျးပါးစပျထဲကောကျထညျ့လိုကျမှာပဲ။ ဒါဆိုပိုဆိုး။ ဒါကွောငျ့သခြောသိမျးရတယျ။
ဟုတျပွီ အငှကေ့ရှူမိလို့ရရှေညျမကောငျးဘူးဆိုရငျ ပရုပျလုံးနဲ့အကွာကွီးထိတှထေ့ားတဲ့ အဝတျကိုဝတျရငျရောလလို့ မေးစရာရှိတယျနျော။
အရပွေားက နထေိတှတေ့ာလဲ မကောငျးပါဘူး။ ဓာတျတှကေ အဝတျတှထေဲမှာစိမျ့ဝငျပွီးရှိနပေါတယျ။ ပွနျလြှျောပွီး နလှေနျးခွောကျသှားမှဝတျပေးတာကောငျးပါတယျ။
ပရုပျလုးံဝယျရငျ အထကျကပွောတဲ့ ဓာတုနာမညျပါတာဆိုရငျ ဝေးဝေးကရှောငျပါ။
တခြို့ပရုပျလုံးတှကေ ထငျးရှူးသားနဲ့လုပျတာရှိတတျတယျသုံးလို့ရတယျ။ မွနျမာပွညျမှာရှိမယျမထငျဘူး။ ထငျးရှူးသားလေးထညျ့ထားတာမြိုးလုပျလို့ရတယျ။ အကောငျးဆုးံကတော့ သခြောလြှျော နပေူပူမှာလှနျးလှနျပေး။
အိတျလေးတှနေဲ့သိမျးပေးရငျ ပိုးကောငျမှားကောငျတှဝေငျဖို့ခကျသှားပါပွီ။ တခြို့ကွတော့ လေးညှငျးပှငျ့လေးတှေ၊ ထငျးရှူးသားသနျ့သနျ့လေးတှကေို အဝတျအိတျလေးထဲခြုပျထညျ့ပွီး ဗီရိုထောငျ့ လေးတှမှောထားကွတယျ။
ဘာပဲဝယျဝယျ၊ ဘာပါဝငျလဲဆိုတာဖတျပါ။ ထုပျပိုးထားတာလေးလှတိုငျး အကောငျးစားမဟုတျပါ။ ခုပျေါနတေဲ့ အမှေးရညျစတာတှရေဲ့တခုခငျြးဆီမှာ ဘာပါသလဲဆိုတာဖတျကွညျ့ပါ။ အထကျကပွောတဲ့ ဓာတျတှပေါလားလို့ပါ။ ဒါပမေဲ့အတုတှပေေါတဲ့ခတျေ၊ အတုမြိုးစုံကိုယျနိုငျငံဝငျလာနတေဲ့အခြိနျမှာ တျောတျောသတိထားရပါမယျ။
ဒီမှတျစုလေးဖတျပွီးခြိနျမှာ မိဘတှစေိုးရိမျကွမယျ၊ သုံးနတော ဘာလုပျရမယျ စိတျပူမှာပဲ။ ဆကျမသုံး တော့ရငျ အကောငျးဆုးံပါ။ ရောဂါလက်ခဏာတခုထဲကွညျ့ပွီး ပရုပျလုးံသုံးခဲ့တာကွောငျ့ တထဈခြ ပွောမရပါ။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးမှာပွသစဈဆေးခံယူပါ။